Budata AVI Media Player maka Windows
Budata AVI Media Player
Free Budata maka Windows (6.10 MB)
Budata AVI Media Player,
AVI Media Player, dị ka aha na-egosi, bụ a free media player na-enye gị ohere ịkpọ video faịlụ na AVI ndọtị.
Ihe omume a, nke nwere interface dị mfe na nke dị larịị, nwere ike iji ya mee ihe nụzọ dị mfe site naka ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile. Ịkwesịrị imepe faịlụ ndị ịchọrọ ikiri site nenyemaka nke mmemme ahụ, nke na-enweghị ịdọrọ na dobe nkwado, site nenyemaka nke onye njikwa faịlụ gụnyere na mmemme ahụ.
AVI Media Player, nke nwere atụmatụ na egwuregwu mgbasa ozi niile dị ka egwuregwu, kwụsịtụ, ntọala olu, laghachi azụ, ọnọdụ ihuenyo zuru oke na ndepụta ọkpụkpọ, anaghị enye ndị ọrụ ihe mgbakwunye ọ bụla karịa ndị a.
Ị nwere ike ịmepụta ma chekwaa listi ọkpụkpọ gị site nenyemaka nke ndepụta ọkpụkpọ na ihe ọkpụkpọ, ebe ị nwere ike ịgbanwe nha ihuenyo. Mgbe e mesịrị, ị nwere ike mfe ịnweta ọkacha mmasị gị videos site na imepe listi ọkpụkpọ ndị ị na-azọpụta site nenyemaka nke mmemme.
Mmemme dị mfe, AVI Media Player anaghị ere akụrụngwa sistemụ yana oge nzaghachi dị mma.
Ana m akwado mmemme ahụ nye ndị ọrụ anyị niile, nke m na-ezuteghị nsogbu ọ bụla dị ka firi, ịsụ nsụ ma ọ bụ mkpọchi noge ule m. Nezie, noge a, m ga-ekwukwa ọzọ na usoro ihe omume bụ nnọọ mfe mmemme na ọ dịghị enye gị elu nhọrọ.
AVI Media Player Ụdịdị